.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Song တွေဖန်တီးဖို့ ပုံလှလှလေးများ ၁
Flash Song တွေဖန်တီးဖို့ ပုံလှလှလေးများ ၁
Flash Song တွေ ဖန်တီးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပုံလှလှလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီပုံလေးတွေက
ပန်းချီဆန်ဆန်လေးတွေနဲ့ Flash Song တွေထဲမှာဆို အရမ်းကို ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ ပုံလေးတွေချည်း သပ်သပ်
ရအောင် Photoshop နဲ့ ဖြတ်ပြီးတော့ တစ်ခြား Flash Animation Effect လေးတွေ ထည့်လုပ်ရင် ရှယ်ဖြစ်ပြီပေါ့။
ပုံစုစုပေါင်း ၅၀ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုချင်တယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ဒေါင်းဖို့ လင့်ပေးထားတယ်။ ဒေါင်းနည်းက
ဒီနေရာလေးမှာ ရေးထားပါတယ်။ ပုံဖြတ်နည်းက သူငယ်ချင်း မိုးကဗျာရေးထားတာကို နောက်နေ့ တင်ပေးပါမယ်။
Download: Flash Song တွေဖန်တီးဖို့ ပုံလှလှလေးများ ၁
မှတ်ချက်။ ။ ဒီပုံတွေကို တစ်ခြားဆိုဒ်တွေမှာ ပြန်လည်မျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါ။
Posted by Thurainlin at 11:45